काटि I बोर्डहरू आयोजना गर्नका लागि I विचारहरू बेजिया
काटिards बोर्डहरू आयोजना गर्नका लागि ideas विचारहरू
काट्ने बोर्ड एक छ भान्छामा आवश्यक तत्व. काठ वा प्लास्टिकबाट बनेको हामी ती दुबैलाई विभिन्न खाद्य पदार्थ काट्न र काट्न प्रयोग गर्दछौं र तिनीहरूलाई टेबलमा प्रस्तुत गर्नका लागि। हामी मध्ये धेरै जसो एक र दुई भन्दा बढी छन्, तर ती राख्नको लागि सँधै स्थान हुँदैन।
काठका बोर्डहरू धेरै सजावटी हुन्छन् र काउन्टरटपमा राखिन्छ र पर्खालको अनुहार झुकाउँछ, तर के यो उत्तम समाधान हो? हामी खाना पकाउँदा तिनीहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनु धेरै व्यावहारिक छ, तर तिनीहरू कुनै पनि समयमा चिप्लन सक्छन् र काउन्टरटप सफा गर्दा बाटोमा जान सक्छन्। यसैले हामी आज अन्य विचारहरु प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं काट्ने बोर्डहरू मिलाउनुहोस्, तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
1 काउन्टरमा हो, तर व्यवस्थित तरिकामा
2 यहाँ र त्यहाँ पर्खेर
3 एक अनुकूलित दराज वा कपाटमा
4 शेल्फ र ढोकामा सामानहरू प्रयोग गर्दै
काउन्टरमा हो, तर व्यवस्थित तरिकामा
के तपाईंलाई काउन्टरटपमा टेबुलहरू राख्न सहज छ? के तपाईसँग अलमारीमा खाली ठाउँ छैन? काउन्टरमा तर काट्ने बोर्डहरू संगठित गर्नुहोस् बक्स, बास्केट वा स्ट्यान्ड प्रयोग गर्दै यसको लागि यो एक धेरै व्यावहारिक समाधान हुन सक्छ।
यस तरीकाले काट्ने बोर्डहरूसँग एउटा हुनेछ वर्कटपको माथि निश्चित स्थान र जब तपाईं यसलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पछि पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले बास्केटहरू छनौट गर्नुभयो भने, थप रूपमा तपाई यी सबै चीजहरूमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंसँग प्राय जसो काउन्टरटपमा हुन्छ, यसैले यसलाई अझ व्यवस्थित देखिन्छ। बास्केट काउन्टरमा वस्तुहरूको संख्या सीमित गर्न एक उत्तम मापन उपकरण हुन सक्छ। के यो मा फिट छैन, बाहिर!
यहाँ र त्यहाँ पर्खेर
यदि तपाईं हामीजस्तै स्पष्ट काउन्टरटप प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, काट्ने बोर्डहरूलाई झुण्ड्याएर यसलाई प्राप्त गर्न ठूलो मद्दत हुनेछ। एक साधारण बार केही कसाई हुकहरूको साथ तपाईं हामीलाई भान्साको कार्यक्षमता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। केवल हामी यसबाट काट्ने बोर्डहरू मात्र ह्या hang्ग गर्न सक्दछौं, तर रैगहरू र अन्य सामानहरू जुन सामान्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सबै भन्दा सहज कुरा भनेको बारमा वा हुकहरू ठीक गर्नु हो भान्छाको अगाडी। याद राख्नुहोस्, हो, यो स्टोभबाट अलिक अलग गर्नुहोस् ताकि खाना पकाउँदा यो गन्दै नहोस्। यदि तपाईंसँग ठाउँ छैन भने तपाईं यो कुनै भित्तामा वा तपाईंको भान्छाको फर्नीचरको छेउमा गर्न सक्नुहुन्छ।
एक अनुकूलित दराज वा कपाटमा
यदि तपाईंले अहिलेसम्म आफ्नो भान्साको डिजाइन गर्नुभएको छैन भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ! तपाईं यस आवश्यकतालाई दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ र दुबै टेबल र प्यास्ट्री मोल्ड वा प्यानहरू राख्न ठाउँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईंको भान्साकोठा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ? सबै हराएको छैन, तपाईं अझै सक्नुहुन्छ तपाईंको क्याबिनेटहरू लाई अनुकूलन गर्नुहोस् वा दराजहरू यो आवश्यकता पूरा गर्न। कसरी?
केहि प्लाईवुड बोर्डहरू यी ठाउँहरू डिजाइन गर्न तिनीहरू एक ठूलो सहयोगी बन्छन्। त्यसो गर्दा, हामी तपाईंलाई भण्डारण स्थान अधिकतम बनाउन भण्डार गर्न आवश्यक पर्ने ती सामानहरूमा रिक्त स्थानहरू समायोजन गर्न सल्लाह दिन्छौं। छविहरूमा तपाईको बिभिन्न बिचार छन् र ती मध्ये एक छ ट्यूटोरियलको साथ आउँछ.
शेल्फ र ड्ररहरू अनुकूलन गर्न अर्को सरल तरिका प्रयोग गर्नु हो काठ वा प्लास्टिकको डन्डी। तपाईंले यी भित्ताहरू वा भित्री कोठामा केवल केही व्यावहारिक डिभाइडरहरू बनाउन गोंद गर्नुपर्नेछ। यो सजिलो र सस्तो हुन सक्दैन।
शेल्फ र ढोकामा सामानहरू प्रयोग गर्दै
यदि तपाईं कपाट काट्ने बोर्डको लागि कपाट अनुकूल गर्न काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भने, तपाईं यी र अन्य भान्छा आपूर्तिहरू मिलाउन सिर्जना गरिएको धेरै समर्थन मध्ये एक खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई सबै ठूला सतहहरूमा र फेला पार्नुहुनेछ विशेष स्टोरहरू आदेश र घर को संगठन मा।
धेरैलाई डिजाइन गरिएको छ अधिकतम ठाउँ हाम्रो क्याबिनेट वा तिनीहरूलाई थप भण्डारण ठाउँ थप्नुहोस्। हामी माथिल्लो क्याबिनेटको मुनि भण्डारण ठाउँ सम्मिलित गर्न सक्षम हुनु र तलको क्याबिनेटमा ढोकाको फाइदा लिन सक्षम हुनुको विचारलाई हामीलाई मन पर्छ।
त्यहाँ धेरै अलग तरिकाहरू छन् काट्ने बोर्डहरू मिलाउनुहोस् भान्साकोठामा, यी केहि हुन् तर तपाईं सायद अरूको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। र सबै मान्य हुन्छन् यदि उनीहरूले कुनै आवश्यक समाधान गरे र व्यावहारिक भए। हामीसँग के छ? कतिवटा काट्ने बोर्डहरू हामी व्यवस्थित गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं? के त्यहाँ कुनै अन्य भान्सा सामान छन् जुन तपाईंको ठाउँलाई आवाश्यक छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिएमा तपाईंलाई तपाईंको विशेष केसको लागि उत्तम समाधान फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » काटिards बोर्डहरू आयोजना गर्नका लागि ideas विचारहरू
आकारमा हुन फिटबलको साथ व्यायाम
मोरक्कन-प्रेरित कुखुरा र ब्रोकोली स्टू